Diego Costa oo ku soo laabtay London iyo Sababta uu u soo laabtay? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Diego Costa oo ku soo laabtay London iyo Sababta uu u soo laabtay?
(05-09-2017) Weeraryaahnkii dibad Jooga ka ahaa kooxda Chelsea ee Diego Costa ayaa ku soo laabtay Magaalada London ee Caasimada dalka England waana markii koowaad ee uu Xiddigaan yimaado Magaaladaas tan iyo Markii uu dhamaaday Horyaalkii lasoo dhaafay.
Diego Costa oo safar ka soo galay dalka Braziil ayaa 3 bilood ka dib kasoo degay Magaalada London waxaana Sababta ugu weyn ee uu usoo gaaray lagu sheegay in uu bilaabo Tababarka kooxda Chelsea iyo in uu wadahadal lafurto Macalinka dalka Talyaaniga ee Antonio Conte.
Cayaaryahanka dalka Spain ayaa lasheegayaa in uu bisha Janaayo 2018 dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Atletico Madrid inta ka horeysana uu Tababar laqaato kooxdiisa sidoo kalana waxa uu Raali ku noqon doonaa in uu fariisto kursiga hadii lacayaarsiinaya uu u dheelo Naadigiisa.
Costa ayaa doonaya in uusan meel iska fadhiyin inta laga gaarayo bisha Janaayo waxaana uu doonayaa in uu koobka aduunka u dheelo dalkiisa Spain sidoo kale Atletico Madrid ayaa kula talisay in uu dib ugu laabto Chelsea lana qaato Tababar.